MIsy Devoly/Satana ato - Dinika forum.serasera.org
MIsy Devoly/Satana ato
Fitohizan'ny hafatra : MIsy Devoly/Satana ato
Valiny : 45
rhaj0 - 07/09/2017 04:28
Ity resaka ity dia nataoko tatsy @ facebook. Asa raha efa nalefako teto, fa dia averiko ihany, satria i Miharena sy i RBNIR ohatra dia mivaralila lava eto @ serasera eto
J’ai eu la chance de rencontrer au cours de mes déplacements un neuropsychiatre capable de diagnostiquer précisément des maladies mentales comme le Docteur Rakotosalomon du service psychiatrique de la capitale d’Antananarivo. Ce dernier parle de « délire d’influence » pour m’expliquer le phénomène de possession?; de périodes durant lesquelles des malades mentaux, comme les schizophrènes, ont l’impression que quelque chose d’étranger les domine. Malheureusement, les personnes qualifiées pour établir un tel diagnostic comme celui du Docteur Rakotosalomon sont rares, très rares. Les pasteurs des centres luthériens ont pour réflexe au moindre trouble psychologique de diagnostiquer l’ensemble des maladies mentales sous une même étiquette : la possession. Le Devoly (le diable)...
Ka io izany ny Kristiana ao @ Loterana (sy Katolika ary Protestanta), fa rahefa "mihetsika hadalana" ny marary, dia tonga dia "Devoly". Satria TSY takatry ny hoza-dohany ny seho eo. Nefa anie, azo hazavaina tsara (rahefa mahay) @ psychiatrie.
Torak'izany koa ny seho (phenomene) maro isan-karazany toa ny Tromba.. raha ny fahatakarako azy aloha.
F'izany hoe kosa aloha, matetika dia TSY mbola takatry ny psychiatrie ilay tranga.
Fa rehefa TSY takatra ny seho (phenomene) iray, dia .. manaiky ankahitsiana (honnetement) hoe TSY takatra. Izay ny an'ny Siantista. Fa tsy hoe, dia lasa miantsampitsampy amina fanazavana namen'olona hafa (na taloha fahagola na l'an zero). Eritrereto hoe, toatoa ny ahoana ny fahalalana (niveau de connaissance) nifotoran'izay fanazavany izay.
Satria dia hainao ihany, fa rahefa mandroso ny fotoana, dia voazava ihany ireo seho (phenomenes) any aoriana any. Mahandrasa fa ny zanakao no hanazava izany.
Dia eo ampiandrasana, dia aza ariana @ izay TSY fahatakarana seho izay ny torimaso, fa mizotoa akoriny azany mba hifoha maraina, satria mbola betsaka no mila karohina sy halalinina.
RBNIR - 07/09/2017 07:10
voafetra ihany tokoa ny fahalalana hananan'ny olombelona rhajo!!!
rhaj0 - 07/09/2017 12:59
Ny fahalalan'ny Loterana/Protestanta/Katolika mahita "malades mentaux" no tena zéro manatody, hany ka tonga dia petapetahiny ho Devoly daholo izay marary rehetra.
Tsy hitanao ve ry RBNIR, fa dia lozabe ny manjo ireto olona marary??
Olona schizophrenique tokony mba sitrana normal aty Kanada izao, TSY mba ampazahoan'ireto adalam-bavaka ireto fanafody sy fitsaboana araka ny tokony ho izy, fa itrikitrihana sy ontsonkontsonina @ "vavaka sy teny mahery" mba hanalana izao Devoly imazinera izao !!!
Tena mila ampiakarina Fitsarana mihintsy ireto Loterana/Protestanta/Katolika ireto fa mamono olona anie izany ee !!!!
RBNIR - 07/09/2017 13:10
Hoy i Jesosy hoe : « Ary raha nahare izany Jesosy, dia nanao hoe: Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody, fa ny marary. » (Matio 9:12)
Manaiky dokotera i Jesosy!!! mpanao fanafody lazainy eto = dokotera ankehitriny...
rhaj0 - 07/09/2017 14:15
Asa ho'a dia mba ahoana mihintsy no famakin-dry RBNIR (Kristiana) io Baiboly io. Tena TSY (mahay) mamaky Baiboly @ tokony ho izy (toa an'i Miharena) ianao ry namana, raha ny fahitako azy, f'aleo tsorina.
Ary dia io tratra ambody omby io i RBNIR sy ny fombany : tsindrotsindrohina ny fehezan-teny ao @ Baiboly, dia iny no ahitrikitrika hanamarinana resak'adala, TSISY ifandraisany @ ilay toko aman'andininy eo.
Mbo novakianao tsara ve ny fizotra'ny tantara-angano ry RBNIR?? Inona no tao @ Matio 8, dia nitohy t@ 9?? Dia inona ny resak'i Jesosy ao @ 9:13 ???
ntss.. ataovy ny devoaranao ry RBNIR fa aza manala baraka Jesosy eo aaa..
rhaj0 - 07/09/2017 18:27
Ao @ Matio 8, dia nanasitrana ny habokana, ny tazo sy nanala demony i Jesosy. Dia nitohy tao @ Matio 9, nanasitrana ny malemy.
Ny fanasitranana na fitsaboana rehetra nataon'i Jesosy dia mifototra @ "MINOU FOTSY". Tendry tanana na teny kely fotsiny dia basy.
Raha vao "mino (anjambany)" ilay marary, dia tonga dia sitranin'i Jesosy.
Hoz'Izy ohatra hoe: tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka izany aho ... ho tanteraka aminao araka izay ninoanao. Dia sitrana...
Fa rehefa TSY mahatoky ny "fanasitranana à la Jesosy" na ny "fahaizana na herin'i Jesosy" kosany ilay olona, dia amen'i Jesosy ny paquet-ny.
Hoz'Izy ohatra hoe: (Nahoana no saro-tahotra hianareo ry kely finoana?)
Asa k'lou raha miombo-kevitra isika hatreto.
rhaj0 - 07/09/2017 19:29
Raha izay, dia aleo atao anaty cadre mihintsy.
fampianarana nataon'i Jesosy (par l'exemple) ao @ Matio ny fanasitranana/fitsaboana, dia araka ny hoe, "mivavaka" sy "mahatoky an'i Jesosy" tanteraka (na an-jambany) fotsiny, izay caricaturiser-ko @ hoe MINOU FOTSY, dia sitrana.
Miharena - 07/09/2017 20:32
Mazava tsara hoatr'io filazanao azy io ny fahazoan'ny Kristianina azy ary mitohy tsara amin'ny resaka nalefan'i RBNIR ilay izy fa tsy mamaky Baiboly mivadika akory izahay fa mahitsy toa anao ihany Rhaj0.
fa indraindray fotsiny mety mivadika ny famakinao ny teny rehefa mba manazava tsara izahay.
Fa raha hiverina amin'io resaka io dia mazava be tsy azo kianina ny fanaon'ny Fiangonana manala devoly satria voalaza ao anaty Soratra Masina izany ary ampiharina mandrak'ankehitrio.
Rehefa tsy sitran'ny Psy dia sitran'i Jesoa.
rhaj0 - 07/09/2017 21:03
Miharena Rehefa tsy sitran'ny Psy dia sitran'i Jesoa.
Efa im-10 ity naverina teto, fa aleo tsapaina mihintsy ny fahaizan'i Miharena (sy RBNIR) Baiboly :
Taiza (ao @ Baiboly) i Jesosy no niteny ilay hoe:
"Ry Taranaka Tsy Mino Sy Ratsy Fanahy !!!" ??
Dia IZA no nomantsamantsanan'i Jesosy teo io?? Ary fa nisy inona, dia fa maninona ???
Ka aboahy iaraha-mijery eto ilay toko sy andininy, ahitana tsara ny fahaizanareo BAiboly ry Miharena sy RBNIR aaa...
RBNIR - 08/09/2017 08:10
Tsy azonao izany ny tiako ambara raha izany, te hilaza fotsiny aho hoe i Jesosy dia mireconnaitre ny asan'ny medecin,
Izany hoe tsy olana mihitsy io na handeha hananotana mpitsabo aza ny olona......(satria izany mpitsabo izany dia efa nisy tamin'ny andron'i Jesosy
Miharena - 08/09/2017 09:22
Miresaka hatra izay manome vokatra isika eto fa aza tonga dia avilinao any amin'ny fahaizana Baiboly ilay izy satria raha izay no tena ilaina dia maro no azo ambara.
Raha miverina amin'ny lohahevitra natsanganao io izao dia mazava tsara fa ny loharanon'ny tsy fanjariana rehetra mitranga eo amin;ny voary dia avy amin'i Satana Devoly avokoa.
Ny manitsy sy mitsabo no ataon'Andriamanitra sy Jesoa.
Ampianarin'i Jesoa ny olona hahay hitsabo sy handroaka devoly. Dia mba nanao ny apostoly saingy nisy tsy afany dia nilazana hoe iny iray iny tsy afaka raha tsy amin'ny vavaka sy fifadian-kanina.
Ka raha sendra izay tsy mety sitrana dia IZY ihany no mahafantatra sy manome toro-hevitra.
Dia mba manatona AZY ianao Rhaj0 fa sitraniNY io fizirizirianao milaza tsisy Tompo izany io a! Anisan'ny lesona omen'ilay Devoly manko io fampiziriziriana olona io.
Aza raisina ho fanbantiana ilay izy fa anjaran'ny efa manana no mizara sy mitaona e!
RBNIR - 08/09/2017 11:19
Aza dia faly manohitra otran'io ry rhajo a!
Mampiasa ny finoany ilay olona, lazainao fa hoe non assistance en cas de personne en danger (olona tokony tsaboina hoy ianao lazainao fa jerempotsiny) fa lazaina hoe finoana e sns...
Manantona mpitsabo indray dia hoy ianao hoe manao tsinontsinona an'i Jesosy e! manalabaraka an'i Jesosy e! (Jesosy anefa tsy misaka ny olona tsy ho any amin'ny dokotera)????
Mahita ho tenenina foana hoy ny olona izay
Moa va tsy ity sary ity izay v ity sary ity????
rhaj0 - 08/09/2017 15:22
RBNIR i Jesosy dia mireconnaitre ny asan'ny medecin
Ny Fanasitranana dia avy @ Ray fa TSY avy @ olbln, toa ny dokotera sy ny mpanao fanafody. Izay no foto-kevi-dehiben'i Jesosy.
Ny "Mpianany" dia nampianariny "hanasitrana" toa Azy koa. Efa io asehony "par l'exemple" tao foana io ny fanao. Fa irep Mpianany no "TSY AMPY FINOANA" dia TSY mahasitrana.
Dia izay "manasitrna @ vavaka" izay indrindra no nampiharin'ny Loterana/Protestanta/Katolika.
Ary io dia namafisin'i Miharena @ "fanekem-pinoany" hoe:
Miharena ny loharanon'ny tsy fanjariana rehetra mitranga eo amin;ny voary dia avy amin'i Satana Devoly
FEHINY: ny olona schizo, dia "ivavahana" ary TSY mila fanafodin-tSiansa mba ho sitrana. "Devoly" io fa tsy izany schizo schizo izany.
Izay no (f)atao raha Loterana/Protestanta/katolika TENA IZY.
Fa ry RBNIR moa, kely finoana, fa mba TSY fohy saina kosa, dia misabaka dia lasa miantsampy any @ "mpanao fanafody" ihany. SAtria hono i Jesosy dia "mireconnaitre ny asan'ny medecin".
HOno ho'a RBNIR: raha miteny hoe "devoly" koa izany i Jesosy, dia mi-reconnaitre, sy mampirisika an'i RBNIR hanantona Devoly i Jesosy???
Bravo RBNIR.. izaho indray ve hi-contredire anao @ izany.
Fa tena mba tsy renao ve ry RBNIR fa i Jesosy anie tsy sasatry ny miteny anao hoe:
"Ry Taranaka Tsy Mino Sy Ratsy Fanahy" ???
RBNIR - 12/09/2017 07:21
Manana ny fotoanany Andriamanitra rhajo!!!
Jesosy ohatra tsy niasa amin'ny maha Zanak'Andriamanitra Azy raha tsy nanomboka teto!!!
« Ary raha nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nahalala izay nihaviany (fa ny mpanompo izay nanovo ny rano no nahalala), dia niantso ny mpampakatra izy » (Jaona 2:9)
Tamin'io ary dia mbola niteny tamin'ny reniny Jesosy hoe!!!
« Hoy Jesosy taminy: Ravehivavy, moa mifaninona akory Izaho sy ianao? tsy mbola tonga ny fotoako. » (Jaona 2:4)
Tsy mbola tonga ny fotoako hoy Izy...
Misy fotoanan'ny zavatra rehetra e!!! hano aloha ny fanafody, fa aza avy dia miandrandra fahagagana!!!
Dia alohan'ny zavatra rehetra!!! ataovy ny sitrapon'Andriamanitra!!!
rhaj0 - 12/09/2017 15:05
RBNIR « Hoy Jesosy taminy: Ravehivavy, moa mifaninona akory Izaho sy ianao? tsy mbola tonga ny fotoako. » (Jaona 2:4)
Misy fotoanan'ny zavatra rehetra e!!
TSindrotsindrohy dia avllambilano foana ho'a ny tantaram-Baiboly ry RBNIR aa...
Ivereno tsara ilay tantara-angano, fa t@ io, dia:
- hozy i Bôfy hoe, "lany ny toaka fa ampazahoy."
- Dia hozy Ilery hoe, "z'inona koa izay ianao miteniteny Ahy".
- Dia hozy i Bôfy: "tsy ho ahy fa ho an'ny mpirevy namanao: tsisy aroso intsony"
- Dia hozy Ilery: "tsy mbola tonga ny fotoako. Allez mandeha.".
Mbola tsy @ fotoana fanaovana ilay daozy teo izany eee..
Ary taoriana kely vao dia navadik'Ilery ho pi @ izay ny rano.
Ary dia nivanaka ny "vavolombelona".
Ka inona ny idiran'ny "Misy fotoanan'ny zavatra rehetra @ izany ry RBNIR???
- ny Kristiana namanao sy Mpianany dia TSY AMPY FINOANA, ary dia TSY afaky ny manasitrana MIHINTSY
- Ianao RBNIR dia KELY FINOANA, ary dia misabaka mangalatra fanafody fa TSY maha-andry an'Atra sy ny sitrak'Atra MIHINTSY.
Ataovy ao ho'a fa ... tsara anie izany eee... Izaho indray ve ho'a hi-contrdire anao
RBNIR - 13/09/2017 09:57
Ka lazao ary hoe oviana sy taiza i Jesosy no efa nanao fahagagana talohan'io namadihany ny rano ho divay io????
Fa naninona no tsy nanao Izy talohan'io???
Satria tsy mbola tonga ilay fotoana tokony hanaovany an'izany.....Tsotra kely e!! mila manakatra kely fotsiny....
rhaj0 - 13/09/2017 13:08
Asa loha raha hihomehy ianao ry RBNIR na ho tsiravina, fa ilay fampiasanao RBNIR ilay "Misy fotoanan'ny zavatra rehetra" no sampona ee...
- ny hamadihana ny rano ho pi dia afaka 30 minitra (satria mbola tsy "fotoanany" ilay t@ Bofy be irakiraka teo)
- ny hamadihana ny "fahatokisanao (fanaf)ody gasy" ho "fahatokisanao (ny fanasitranan')Atra" dia any an-kibon'ny omby (satria ianao RBNIR tsy fohy saina ho'a, fa tsy maintsy mampiasa paracetamol fa efa iny no nolazain'ny Siansa fa manasitrana fa tsy zavatra hafa toa ny "vavaka lavareny")
RBNIR - 13/09/2017 13:23
mazava ilay fanontaniako, naninona no niandry 30 taona i Jesosy vao nampiasa ny maha Zanak'Andriamanitra Azy,
Naninona no tsy nampiasainy tao an-tanana ny heriny hatramin'ny fahakeliny?????
Satria hoy aho misy fotoana ny zavatra rehetra!!!!
rhaj0 - 13/09/2017 14:25
ilay "fotoana" 30 minitra aloha izany anaovan'i RBNIR bemarenina. OK.. fa nihomehy ihany ianao tao ooo???
RBNIR naninona no niandry 30 taona i Jesosy vao nampiasa ny maha Zanak'Andriamanitra Azy
Azo hanontaniana ny mpanoratra ny tantara-angano.. na koa ireo nandravina ny taratasy rehetra ho Baiboly, satria mety nisy "fahagagana" nataon'ny zanak'Atra tany fa no-censurer-ny. Fa efa maty moa ireo, ka dia io revena io izany ny tantara-angano eee...
Fa izaho koa mba valalanina ee... Mety hoe, rehefa antitra i Jesosy izay vao fatsora. Tahaka an'i Tsaratsara ihany io. Dahalo taloha, dia nahita fika raitra kokoa hangalarana ny olona.
Fa maninona koa azany taloha i JEsosy mampianatra any @ Sinagoga, ary tena saro-piaro ny "tranon'Atra" dia ny Sinagaoga mihintsy Izy an...
Dia fa naninona no aty aoriana ianareo Kristiana ry RBNIR, tsy mba "saro-piaro" ny "tranon'Atra" dia ny Sinagaoga mihintsy an... koa na ny mandeha any azany TSY ataonareo mihintsy.
Dia hoz'enao RBNIR eto koa ve hoe, "misy fotoanany ny zava-drehetra"???
Izaho mahita fa "any an-kobon'ny omby" koa izany, satria ho'a ianao RBNIR tsy fohy saina ho'a, ka handehandeha any @ izany sinagaogagaoga izany. Sa ahoana???
RBNIR - 13/09/2017 15:03
mpanao ny sitrapon'Andriamanitra Izy (nitandrina ny Sabata)....tsy voatery hiandry 30 an